H Isibhengezo
Izinhlelo zokusebenza: Ngokukhetha izisekelo ezifanelana nanoma iyiphi indawo ephansi, ifulegi likanxande lingasetshenziswa ezimweni eziningi, isibonelo ukukhethaunyawo lwemotoifanele indawo yemoto, isiteki esiphansi semicimbi yangaphandle, isisekelo sensimbi sezimo ezinomoya noma umbukiso wokuhweba wangaphakathi.
H, uhlobo olulodwa lwefulegi elingunxande, olwaziwa nangokuthi ifulegi le-Block, ifulegi le-Edge noma ifulegi le-Telescopic, lingenza ifulegi libonakale kahle nganoma yisiphi isikhathi.Amafulegi angama-recatangle anendawo enkulu ephrintekayo kuneamafulege ezinyembezinoma amafulege ezimpaphe, afanele imilayezo yokuthengisa enomthelela ophezulu kanye nokufaka uphawu.
(1) Izinto eziyinhlanganisela yekhabhoni zivumela izigxobo ukuthi zigobe futhi zinyakaze emoyeni kodwa akulula ukuphuka ngisho nasezimweni ezinzima kakhulu.
(2) Izigxobo ze-Premium eyinhlanganisela yekhabhoni ezisethwe nesikhwama sokuthwala sifakiwe - esingasindi futhi siyaphatheka.
(3) Indawo enkudlwana ephrintekayo ezenza zifaneleke ngokuphelele imilayezo yokumaketha esebenzayo, enomthelela ophezulu kanye nokufaka uphawu.
(4) Ukufakwa kwe-plug-in kulula ukukuhlanganisa.
(5) Metal ring ukwandisa usebenzisa ukuphila.
(6) Uhlu olubanzi lomsebenzi onzimaongakhetha baseukuze ivumelane nanoma iyiphi indawo nesimo."Spin free" ukuze ugcine ifulegi lakho lingahlangani.
Usayizi Bonisa ubukhulu Usayizi wefulegi Isigaba sesigxobo Isilinganiso sesisindo esiphelele sesethi ngayinye
Thola okunye okunye kwethui-hardware yefulegi, flag izisekelofuthiizesekeli.
Okwedlule: 4 ku-1 Uhlelo
Olandelayo: S Banner(Uphaphe)